गजल सिद्धान्तको उपयोगी पुस्तक | मझेरी डट कम
kbs — Fri, 12/24/2010 - 20:43
सनतकुमारको गजलको किताबले धेरै विशेषताहरू बोकेको छ । यसमा गजललेखनका लागि आवश्यक सैद्धान्तिक कुराहरूको पूर्ण जानकारी ज्यादै सरल ढङ्गले दिइएको छ । अरबी बोलीका तीन वर्ण-गेन, जि र लाम् मिलेर बनेको 'गजल' को मूलमर्म भन्नु नै प्रीतिको स्वर हो । 'ग' भनेको वाणी, 'ज' भनेको नारी र 'अल' भनेको साथको अर्थमा हुन्छ- प्रेयसीसँग कुराकानी तर आजकलका गजलमा ज्यादै विविधतापरक शैली र भावहरू भित्रिएका छन् । माया, प्रेमभन्दा पनि आक्रोश, विद्रोह, राजनीति, असन्तुष्टि, कुन सन्दर्भ र विषयमा गजल लेखिएको छैन र ! अपशोच! धेरै गजलकारहरू नियमभन्दा बाहिर गएर लेखिरहेका छन् र यसै कारणले पनि एउटाले अर्काको गजलमाथि नियमको सुइरो रोपिरहेको पनि देखिन्छ । वाह ! गजलको यस कृतिले अबश्य पनि गुरुको काम गर्छ नै । रदीफ, काफिया, मतला, मकता, मिसरा-ए-उला, मिसरा-ए-सानी, तखल्लुस, जस्ता गजलका अत्यावश्यक तत्वको ज्ञानले मात्र पनि सिकारु गजलकारलाई बाटो पहिल्याउन सहज हुन्छ । उनले गजलका तीन अक्षरलाई 'ग'-गम्भीरता, 'ज'-जीवन्तता र 'ल'- लयात्मकता भनेर आफ्नै शैलीमा पनि व्याख्या गरेका छन् भने अर्कोतिर विम्ब, अलङ्कार, प्रतीकको समेत विश्लेषण गरेका छन् । गजलका गुण-अबगुण, गायनको तरिका, सङ्गीतको सङ्गति र गजल श्रवणको तरिकासमेत सिकाएर आफ्नो गजलकृतिलाई पूर्ण बनाउने प्रयास गरेका छन् सनतले ।
यस कृतिभित्र सनतकुमारका जम्माजम्मी छत्तीस वटा गजल समाविष्ट छन् र अन्य उदाहरणहरूमा यिनै गजलका शेरहरूलाई तलमाथि गरेर प्रस्तुत गरेका छन् । गजलहस्ती गुलजार, गालिब, गुलाम अली, साहिर, बशीर बट्रलगायतका केहीका शेरहरूलाई पनि उनले उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका भए पनि नेपाली गजलकारका गजलहरू भने कुनै उदाहरणमा पनि समाविष्ट छैनन् ।
गजलकार सनतकुमारले पुरातात्िवक विषयमा विद्यावारिधि गरेका भए पनि उनी गजलज्ञाताका हिसाबले पनि 'वाह' गजलबाट गजलमा पनि विद्यावारिधि गरेसरहको व्यक्तित्व ठहरिएका छन् । कृतिगत हिसाबले पनि उनको यो पहिलो कृति हो । उनी थोरै लेख्छन् तर राम्रो लेख्छन् । सिद्धान्तभित्र बाँधिएर लेख्दा धेरै लेख्न नसकिने पनि हुनसक्छ । थोरै लेखेर पनि चर्चाको केन्द्रविन्दुमा रहन सफल हुनुले उनको गजल अन्वेषण र लेखनको सफलता मान्नुपर्छ । उनी गजल गायनका क्षेत्रमा पनि अग्रणी मानिन्छन् र लेखन र गायनलाई तादात्म्य मिलाएर लेख्ने हुनाले सफल गजलकार ठहरिएका छन् ।
कृति ः वाह ! गजल (गजलको किताब)
तिमीले सोच्यौ होला
विकृत फूलहरूसँगको साक्षात्कार